မင်းသမီးချောလေး Mone Kamishiraishi နှင့် Moka Kamishiraishi - JAPO Japanese News
မင်းသမီးချောလေး Mone Kamishiraishi နှင့် Moka Kamishiraishi
သော 09 Oct 2020, 16:15 ညနေ
ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ မင်းသမီး (၂)လက်ရှိပါတယ်… သူတို့တွေကညီအမတွေပဲတဲ့…
Mone Kamishiraishi နဲ့ Moka Kamishiraishi တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတို့ 2019 ခုနှစ်ကမှထွက်ထားတဲ့ “恋はつづくよどこまでも” ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုသိကြလား?
မင်းသားအနေနဲ့ Takeru Sato ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဆရာဝန်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ( ၁၆ ခေါက်ကြည့်လိုက်တယ်!! 😀 )
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာမင်းသမီး Kamishiraishi Mone ဟာ Sakura အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။
သူမဟာ (၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၇ ရက်နေ့)မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဇာတိကတော့ Kagoshima ခရိုင်ကဖြစ်ပါတယ်။
အရပ်ကတော့ 1.52 m ပါ။ အခုဆိုရင် သူမအသက် (၂၂)နှစ်ရှိပါပြီး.. ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်နေတယ်နော်…
သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားများစွာထဲကမှ ၃ ကားလောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
မထင်ထားဘူးနော်…ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအောင်မြင်တဲ့ Your Name ဆိုတဲ့ animation မှာ သူမဟာအသံသရုပ်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
(2) Lady Maiko
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာလည်း မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်ထားပြီး Maiko တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံး ထင်ဟပ်ပြသပေးနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကထွက်ထားတဲ့ဒရမ်မာပါ။
(3) 恋はつづくよどこまでも(love lasts forever japanese drama)
ဒါကတော့ ညွှန်းစရာမလိုလောက်တော့ဘူးထင်တယ်နော် ….
crush ကို ၅ နှစ်လုံးလုံးကြိုက်လာခဲ့ပြီး သူ့ဆီရောက်အောင်ကြိုးစားရင်း နောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့ crush ကမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်လို့ သူမကိုဆက်ဆံတယ်။ ဒါနဲ့ပဲဇွဲမလျော့တမ်းကြိုးစားရင်းနောက်ဆုံးမှာတော့……..
ကဲ. နောက်ထပ်သူမရဲ့ ညီမဖြစ်သူကို မိတ်ဆက်ပေးပါအုံးမယ်..
မင်းသမီး Moka Kamishiraishi ပါ။ သူမကတော့ အမဖြစ်သူလိုမင်းသမီးတစ်ယောက်၊ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ရုံသာမက မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း အနုပညာလောကထဲမှာလှုပ်ရှားနေပါတယ်။
သူမဟာ (၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့) မှာမွေးဖွားပြီး အခုဆိုအသက် ၂၀ ရှိပါပြီး။
ဒီ animation မှာ အသံသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်။
(2)A Forest of Wool and Steel
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အမဖြစ်သူနဲ့အတူသရုပ်ဆောင်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။…နောက်ပြီး ဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ပဲသူမဟာ “ Japan Academy Award for Newcomer of the Year” ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ စကားမစပ် Morisaki Win လည်းဒီဆုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကရရှိခဲ့ပါတယ်။
(3) Mr. Hiiragi’s Homeroom
ဒီနေ့ JAPO ပရိသတ်တို့အတွက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေး (၂)ယောက်ကို သူတို့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီး… အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်လည်း နောက်ထပ်ဘယ်သူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးအုံးမလဲဆိုတာ စောင့်မျှော်ပေးကြပါအုံးနော်…..
ချစ်စရာကောင်းလွန်းသူ မင်းသမီးချောလေး Nana Mori !!!!